Newa Times : वैशाख १ गते वाग्द्वार यात्रा
पर्यटन » लेख/फीचर/समीक्षा
वैशाख १ गते बिहान सात बजेतिर काठमाडौं उपत्यकाको उत्तरस्थित बूढानिलकण्ठ परिसरमा पुगियो । साथमा थिए, मित्र प्रभातकिरण कोइराला । गन्तव्य थियो– वाग्द्वार, बागमती नदीको मुहान ।
बैशाख १ गते काठमाडौंका धेरै घुमिने ठाउँ मध्येको एक यो पनि हो । यस दिन यहाँ ठूलो मेला लाग्दछ । हाम्रो उद्देश्य पनि मेला भर्नु नै थियो । हुन त मान्छेहरु अघिल्लो दिन नै हिंडी वाग्द्वारमा रात बिताई स्नान गरेर फर्कन्छन् । काठमाडाैं उपत्यकामा विकसित अनेकाैं संस्कृति वा साँस्कृतिक जीवनमा याे पनि एउटा हाे । बाटाेघाटाेकाे असुविधा भएकाे बेलामा अघिल्लाे दिन दिउँसै हिडेर वाग्द्वारमा रात बस्न जाने चलन थाहा थियाे । हिड्दै गर्दा रात पर्ने र जंगलकाे बाटाे भएका कारण यसलार्इ कठिन यात्राकाे रूपमा पनि लिइन्थ्याे । तर पनि यति पल्ट वाग्दार पुगिसकें उति पल्ट पुगिसकें भनी गाैरवका साथ बखानहरूकाे समाजमा हुर्केकाे म । तर अचेल यात्राकाे अाधारसम्मै माेटरबाटाे पगिसकेका कारण साेही दिन बिहानमात्रै जाने र फर्कनेहरू बढी हुन्छन् । हाम्राे पनि सोही दिनमात्र पहाड चढ्ने र फर्कने पूर्वयोजना बनेको थियो । योजनाअनुसार त बिहान ६ बजे नै बूढानिलकण्ठमा पुगेर उक्लिसक्ने थियो तर एक घण्टा ढिलो पुगियो । मेला भर्न जानेहरुको कुनै चहलपहल पनि त्यहाँ थिएन । ढिलो भइयो र पछि परियो । बाटो सोध्दै अगाडि बढ्यौं । केही बाटो अघि बढेपछि शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रवेशद्वार आइपुग्यो । शिवपुरी क्षेत्र नेपाली सेनाको नियन्त्रणमा छ । प्रवेशका लागि नेपाली नागरिकका लगि प्रति व्यक्ति दश रुपैया तिर्नुपर्ने रहेछ । दुई जनाको २० रुपैया को टिकट काट्यौं र त्यहीं प्रवेश पुस्तिकामा नाम र हस्ताक्षर गरी यात्रा थालनी गर्यौं ।
अब बाटामा हामी मात्रै थिएनौं । काभ्रेवनस्थलीतिरका एक हूल महिलाहरूमध्ये एक जना हिड्न नसकेर त्यतै मेला भर्नका लागि गाडी नै रिजर्भ गरेर आएकाहरुसँग पठाइएको थियो । गाडी घुइय्य गरेर अघि बढ्यो । हामी तिनै महिलाहरुसँग गफिँदै अघि बढ्यौं । कुराकानी रमाइलो नै भयो । हाम्रो प्रश्न थियो– मेलामा महिलाहरु मात्र किन त ?’ उनीहरूमध्ये एकले जवाफ दिइन् – पुरुषहरु मेलामा के आउँथे र ? आउन नै नमान्ने । हामीमात्रै आयौं । पुरुषहरु त यति बेलासम्म (करीव नौ बजेतिर) पनि सुत्दै होलान् ।’
महिलाहरु निकै बलिया नै देखिन्थे । तीमध्ये हिड्न नसक्ने त झापा माइत रहेकी महिला रहेछन् । मेरो साथी प्रभात पनि झापाली नै । मैले भनें– झापाली हुँदैमा हिड्न नसक्ने त होइन, उहाँ पनि झापाली नै हुनुहुन्छ ।
बाटामा अनेकौं कुरा भयो । विहानै उठेर सपनतीर्थ को दर्शन गरी बूढालीलकण्ठ हुँदै यतातिर आएका रहेछन्, उनीहरू। विहान निस्कदा हल्का पानी परेको थियो । यात्रामा निस्कने बेला यसरी पानी पर्नु शुभ मानिन्छ, नेपाली समाजमा । उनीहरू खुशी थिए ।
अलि अगाडि बढेपछि गोठाटारबाट आएका दुई जोडी (संभवतः लोग्नेस्वास्नीहरु) भेटिए । पहिलो पल्ट आएका रहेछन्, सोधें – बाटो कति बाँकी होला ?’
बाटोमा एउटा गुम्बा आइपुग्यो, नागी गुम्बा नामले प्रसिद्ध । अानीहरू मात्रै बस्ने गुम्बाका रूपमा चर्चित छ । ठूलो चौर पनि रहेछ । मान्छेहरु त्यहाँ खानपिन गरिरहेका थिए । गुम्बामा खाने कुराको पसल पनि रहेछ । त्यहीं पसल नजिकै दुईचार जना आनीहरु मिलेर आलु तरकारी, पुरी, चिउरा आदि बेचिराखेका थिए । हामीले आलु तरकारी दुई ठाउँमा किन्यौं र बोकेर गएका अरु खानेकुरा झिकेर खान थाल्यौं ।अहिले सम्झँदा हाँसो पनि उठ्छ किनभने सम्पूर्ण बाटोको एक प्रतिशत पनि यात्रा गरिएको थिएन, त्यति बेलासम्म । उनीहरूसँग पनि केही बेर कुरा गर्दै अगाडि बढेपछि एक ठाउँबाट काठमाडौं उपत्यका छर्लङ्गैै देखियो । दृष्यलाई आफ्नो क्यामेरामा कैद गरिहालें । दृष्यलाई पृष्ठभूमिमा राखेर उनीहरुकै क्यामेराबाट पनि उनीहरुको फोटो खिचिदिएँ । उनीहरु विस्तारै हिडिरहेका थिए । हामी अगाडि बढ्यौं । बागद्वारमा घन्टौं अलमलियौं तर त्यति बेलासम्म पनि उनीहरु आइपुगिसकेका थिएनन् ।
हामी हिड्दै गयौं, बढ्दै गयौं । थालनीमा हामी मात्रै छौं जस्तो लागेको थियो, माथि माथि पुगेपछि त भीड भेटिन शुरू भयो । भीड यतिसम्म कि कहिले काहीं साँघुरो बाटो आयो कि रोक्नु नै पर्थ्याे । चार जना महिला एक ठाउँमा बसिरहेका थिए । तिनीहरुमध्ये एकले सोधिन्– अब कहिले पुग्ने होला ?’ फर्किराखेकाहरुमध्ये कसैले एक घन्टा भने त कसैले डेढ घन्टा । दुई घन्टामा पुगिन्छ भन्नेहरु पनि आए । मैंले भनें– ‘तपाईहरु यस्तै बसिराख्ने हो भने पाँच छ–घन्टा पनि लाग्न सक्छ, पुग्दै नपुग्न पनि सक्छ ।’ अलि ठट्ठा पारामा भनेको थिएँ तर मेरो कुराले तिनीहरुलाई लज्जित बनाएछ कि कुन्नी, हिड्ने तरखर गर्न थाले । तिनीहरुमध्ये एउटी युवतीको हातमा मोवाइल फोन थियो र त्यसबाट गीत सुनिरहेकी थिइन् । हिन्दी गीत राम्रो थियो । गीत सुन्दैसंगै हिड्न थाल्यौं । केही बेरपछि फर्केर आइरहेको एउटा त्यस्तै १७–१८ वर्षको तामाङ केटोले ती मोबाइलधारी युवतीसँग केही कुरा सोध्यो, हामीले बुझेनौं । पछि बुझ्दा थाहा भयो, त्यो मोबाइल त्यही केटाको रहेछ, बाटोमा खसेको र ती महिलाले भेटाएको । मोबाइल अर्कै महिलाले भेटाएको रहेछ, र किन त्यत्तिकै बोकेर हिड्ने बरु गीत सुन्दै जाऔं न भनेर युवतीले लिएको रहेछ । फिर्ता भयो । हामी अघि बढ्यौं । केही माथि पुगेपछि एउटी महिला पछाडि फर्केर फत्फताइरहेकी थिई– ‘‘साले हरामी, मार्दिन्छु म त्यसलार्इ त, कस्तो शुद्धि नभएको … ।’’ उनी आफ्नै छोरालाई गाली गरिरहेकी रहिछिन् । अघि मोबाइल हराउने उसैको छोरो रहेछ । मोबाइल हराएकोमा रिसाएकी । मोबाइल भेटाइसकेको सूचना दियौं । अर्थ नै नबुझी शब्दको प्रयोग गर्दा कति उल्टो पर्न सक्छ, आफ्नै छोरालाई ‘हरामी’ भन्दै थिईन् उनी ।
बल्ल बाग्द्वार पुग्यौं । हेर्दाहेर्दै भीड बाक्लियो । पूजा मात्रै गर्नेको र धारामा नुहाउनेहरुको गरी दुई लाइन थियो । तीनतिर पहाड र खोंचमा धारा । धारा अगाडि केही फीटको बाटो र त्यो बाटो मुनि सानो पोखरी । र, यसको वरिपरि मेला भर्न आउनेहरुको भीड । लाइन मिलाउन बसिराखेका स्थानिय ‘भोलेन्टियर’हरुमा अलिकति पनि शिष्टता थिएन । धारा कता छ र कहाँबाट जाने अथवा कहाँ जानु हुन्छ र जानु हुन्न भन्ने केही थाहा नपाएर अलमिलिरहेको भीडलाई ती ‘भोलियन्टिर’हरु यसरी गाली गर्दै थिए, मानौं, भीडलाई सबै कुरा थाहा थियो र थाहा भएपनि नियम मिच्दै थिए। बाटो देखाउन बसेका ‘भोलेन्टियर’हरू गाली गर्नमैं मस्त देखेर दुःख पनि लाग्यो । भाेलियन्टयर हुन पाउँदा केही अधिकार त पाउने भइ नै हाल्याे र त्याे अधिकारकाे तुजुक देखाउन पाएर गाैरवान्वित पनि थिए ।
हामीलाई हतारो थिएन । तत्काल भीडतिर लागेनौं पनि । माथि डीलबाट भीड हेर्यौं । डीलमा बसेर भीड हेर्नेहरुको भीड त्यहाँ अलग्गै थियो । बरु त्यही भीडमा हुल्यौं । क्यामेराबाट भीडको दृष्यहरुलाई धमाधम उतार्यौं पनि । त्यहीं गफ गरेर बसिरहेको बखत हामी नजिकै एक बोतल पानी आइपुग्यो, धारामा थापेर ल्याएको रहेछ । लाइनमा बसेर जान नचाहेको वा नसकेकाले एक जनामात्रै गएर पानी ल्याएको रहेछ र त्यो पानी त्यहीं टाउको टाउकोमा पर्ने गरी छर्कियो । भनें– ‘‘लौं, हामी पनि बाग्द्वारमा पुग्यौं र नुहायौं, होइन त ?’’
सबै गललल हाँसे ।
एक घन्टा त्यहाँ बसेपछि बाग्द्वारको धारालाई नजिकबाट फोटो खिच्ने अभिप्रायले तल झर्याैं । एउटा भोलेन्टियर’लाई फोटो मात्रै खिच्ने र फर्किहाल्ने भनेर मनाइसकेको थिएँ, तर अरु ‘भोलेन्टियर’हरु मान्दै मानेनन् । अलिबेर कराउन थालेपछि बल्ल भित्र पस्न दिए। एउटा धारा, त्यही थियो बागमतीको मुहान । अरु बेला पहाडबाट मूल फुटेर आइरहेकोलाई बाघआकृतिको ढुंगाको धाराबाट बगाइराखेको हुन्छ भने त्यस दिनमात्र पित्तलको धारा जडान गरिन्छ । वास्तवमा याे वाक् सँग सम्बन्धित थियाे । वाक् नै अपभ्रंश भएर बाग् बन्याे । बाग् काे कुनै अर्थ लाग्दैन, बरू त्यसलार्इ बाघ भनेर बुझ्न थालियाे । यही बुझाइकाे परिणाम हाे, धारामा बाघकाे मुखाैटा राखिनु ।
वरिपरि ढुङगाका केही कलाकृतिहरु पनि थियो र ती कलाकृतिहरुमाथि सामान्य दृष्टि दिएँ । ती कलाकृतिहरु काठमाडौंका नेवार जातिले चढाएका हुन् अथवा अन्य समुदायले काठमाडौंमा बनाउन लगाएर चढाएका हुन्, शैलीले यही भन्छ । केही वर्षअघिसम्म पनि बाग्द्वारमा काठमाडौंका नेवारहरु ठूलो मात्रामा जान्थे, बाजागाजासहित । तर अचेल पातलिन थालेको छ र गएका नेवारहरुलाई पनि अन्य समुदायले छोप्न थालेको छ ।
अघिल्लो दिन नै पुगी वास बस्न जानेहरु कहाँ बस्छन् त ? धारा वरिपरि वास वस्ने ठाउँ त देखिन्न । धाराभन्दा अलि माथि उत्तरतिरकाे पहाडमा चढेपछि अर्को ठाउँ पनि रहेछ, सम्म परेकाे । त्यहीँ वास बस्दा रहेछन् । त्यहाँ गुम्बा पनि एउटा बनेकाे रहेछ । त्यहाँ वरिपरि सानो बजार लागेको रहेछ त्याे दिन । बाग्द्वार मात्रै जानेहरु धारामा नुहाएर वा मुख मात्रै घाेएर फर्कदारहेछन् । हामी पनि यत्तिमै फर्कने याेजनामा थियाैं तर शिवपुरी हुँदै विष्णुपादुका (विष्णुमतीको मुहान) भएर फर्कने हिसावले झन् झन् उक्लदै गयौं ।
पर्यटक भरिया : कठिन जिन्दगी
विकृति रोक्न रोदी रोक्यो, ग्रामिण पर्यटन रोक्न नपरोस्